ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပါက ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ယူကရိန်းသို့ စေလွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်ပြော - People Media Myanmar
Home ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပါက ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ယူကရိန်းသို့ စေလွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်ပြော
ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပါက ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ယူကရိန်းသို့ စေလွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်ပြော
ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စေလွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းထပ် လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းနိုင်ငံကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါက ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
“ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့် မယ်။ စီးပွားရေးအရနောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးနောက်ဆက်ဆွဲရလဒ်တွေသာမက ဒီကထက်ပိုတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလည်း ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေ ရိုက်ခတ်လာပါလိမ့် မယ်။ တကယ်လို့ သူ (ပူတင်) ကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက အကြီးမားဆုံးကျူး ကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကျူးကျော်မှုကြီးက ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။” ဟု သမ္မတဘိုင်ဒန်က သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
သမ္မတဘိုင်ဒန်က ယင်းစကားကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အဆောက်အ ဦသို့သွားရောက်စဉ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူကရိန်း-ရုရှား ပဋိပက္ခအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်တက်လာသောသတင်းများရှိမရှိ သတင်းထောက် များက မေးမြန်းရာတွင် သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က “မရှိပါဘူး။ နောက်ထပ်တက်လာတဲ့သတင်းတွေမရှိသေးပါဘူး။ အဲ .. ရုရှားတပ်တွေ တပ်စွဲထားတဲ့အနေအထား အပြောင်းအလဲမရှိဘူးဆိုတာကလွဲလို့ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့သိထား တဲ့အတိုင်းပဲလေ ရုရှားတပ်တွေ ဘယ်လာရုစ်-ယူကရိန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာ ရောက်နေကြပါတယ်။” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ရုရှားတပ်များ ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရန် ရုရှားသမ္မတပူတင်က အမိန့်ပေးခဲ့ပါက ပူတင်ပိုင်ဆိုင်သော အကျိုးစီးပွားများကို ပစ်မှတ်ထား၍ စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ဆောင်ရွက်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း သမ္မတ ဘိုင်ဒန်က ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
အဆုံးသတ်တွင် ရုရှားသမ္မတပူတင် မည်သည့်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကို သတင်းထောက်များက မေးမြန်းခဲ့သည်။
“ခင်ဗျားတို့သိပါတယ် …. ကျွန်တော် သူ့ကို တကယ့်ကို အရိုးသားဆုံးဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ပြောတာက အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းထုတ်ရမှာနဲ့ တူနေတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင် မတူညီတဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဆိုရင်လည်း ဘယ်လာရုစ်ကနေ ယူကရိန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက် တပ်အင်အားတွေ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ချထားနေ တယ်ဆိုတဲ့အချက်က သူ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အတိတ်က သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေ ရော၊ သူ့အဖွဲ့ထဲက လူတိုင်းပြောဆိုနေကြတာတွေရော၊ ဖြစ်နိုင်တာတွေအားလုံးကိုရော ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးဟာ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေ လာတာပါပဲ။” ဟု ဘိုင်ဒန်က ပြောသည်။
ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၀၀၀၀၀ ကျော် ယူကရိန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက် တပ်ဖြန့်ချထားကြောင်းတွေ့ရပြီး ရုရှား အနေဖြင့် ယူကရိန်းကို အချိန်မရွေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရက သတိပေးထားသည်။
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၈၅၀၀ ကို အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ထားပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် အမေရိကန်အစိုးရ အနေဖြင့် ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ကူညီရန် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဥရောပဒေသတွင် တပ်ဖြန့်ချထားခြင်း အား အစီအစဉ်မှဖယ်ထုတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျွန်ကာဘီက ဇန်နဝါရီ လ ၂၅ ရက်နေ့က ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တခြားရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန် တော်တို့ရဲ့အလုပ်က သမ္မတကြီးကို၊ စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကို ရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် လာမယ့်ရက်တွေ၊ သီတင်းပတ် တွေအတွင်းမှာ နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို တပ်လှန့်ထားဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။” ဟု ဂျွန်ကာဘီက ပြောသည်။
Ref: Biden: Ukraine invasion would ‘change the world’ — but US, NATO won’t be there
ရုရှားနိုငျငံက ယူကရိနျးကိုကြူးကြောျပါက ကမ္ဘာကွီးပွောငျးလဲသှားမညျဖွဈသောျလညျး အမရေိကနျနှင့ျ နတေိုး တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ယူကရိနျးသို့ စလှေှတျမညျမဟုတျကွောငျး ဘိုငျဒနျပွော
ယူကရိနျးနိုငျငံသို့ အမရေိကနျတပျဖှဲ့ဝငျမြား သို့မဟုတျ နတေိုးတပျဖှဲ့ဝငျမြား စလှေှတျမညျမဟုတျကွောငျးထပျ လောငျးပွောကွားခဲ့ပွီးနောကျ ရုရှားနျိုငျငံက ယူကရိနျးနိုငျငံကို ကြူးကြောျတိုကျခိုကျခဲ့ပါက ကမ္ဘာကွီးပွောငျးလဲ သှားမညျဖွဈကွောငျး သမ်မတဂြိုးဘိုငျဒနျက ဇနျနဝါရီလ ၂၅ ရကျနေ့က ပွောကွားလိုကျသညျ။
“ရုရှားနိုငျငံက ယူကရိနျးကို ကြူးကြောျခဲ့မယျဆိုရငျ အငျမတနျကွီးမားတဲ့အကြိုးဆကျတှဖွေဈပေါျလာပါလျိမ့ျ မယျ။ စီးပှားရေးအရနောကျဆကျတှဲရလဒျတှနေဲ့ နိုငျငံရေးနောကျဆကျဆှဲရလဒျတှသောမက ဒီကထကျပိုတဲ့ အကြိုးဆကျတှကေို ကွုံတှေ့ရမှာပါ။ ကမ္ဘာတဈဝနျးလညျး ကွီးမားတဲ့အကြိုးဆကျတှေ ရိုကျခတျလာပါလိမ့ျ မယျ။ တကယျလို့ သူ (ပူတငျ) ကြူးကြောျခဲ့မယျဆိုရငျ ဒုတိယကမ္ဘာစဈပွီးကတညျးက အကွီးမားဆုံးကြူး ကြောျတိုကျခိုကျမှုကွီးဖွဈလာပါလိမ့ျမယျ။ ဒီကြူးကြောျမှုကွီးက ကမ္ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲပဈလိမ့ျမယျ။” ဟု သမ်မတဘိုငျဒနျက သတငျးထောကျမြားကို ပွောသညျ။
သမ်မတဘိုငျဒနျက ယငျးစကားကို ကွိုတငျစီစဉျထားခွငျးမရှိဘဲ အမရေိကနျကှနျဂရကျလှှတျတောျအဆောကျအ ဦသို့သှားရောကျစဉျပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ယူကရိနျး-ရုရှား ပဋိပက်ခအရေးနှင့ျပတျသကျ၍ နောကျထပျတကျလာသောသတငျးမြားရှိမရှိ သတငျးထောကျ မြားက မေးမွနျးရာတှငျ သမ်မတဂြိုးဘိုငျဒနျက “မရှိပါဘူး။ နောကျထပျတကျလာတဲ့သတငျးတှမေရှိသေးပါဘူး။ အဲ .. ရုရှားတပျတှေ တပျစှဲထားတဲ့အနအေထား အပွောငျးအလဲမရှိဘူးဆိုတာကလှဲလို့ပေါ့။ ခငျဗြားတို့သိထား တဲ့အတိုငျးပဲလေ ရုရှားတပျတှေ ဘယျလာရုဈ-ယူကရိနျးနယျစပျတဈလြှောကျမှာ ရောကျနကွေပါတယျ။” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ရုရှားတပျမြား ယူကရိနျးကိုကြူးကြောျတိုကျခိုကျရနျ ရုရှားသမ်မတပူတငျက အမိန့ျပေးခဲ့ပါက ပူတငျပိုငျဆိုငျသော အကြိုးစီးပှားမြားကို ပဈမှတျထား၍ စီးပှားရေးအရေးယူပိတျဆို့မှုမြား ဆောငျရှကျသှားဖှယျရှိကွောငျး သမ်မတ ဘိုငျဒနျက ဖွည့ျစှကျပွောသညျ။
အဆုံးသတျတှငျ ရုရှားသမ်မတပူတငျ မညျသည့ျလမျးကွောငျးကို ရှေးခယြျလိမ့ျမညျဟု ထငျမွငျကွောငျး သမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒနျကို သတငျးထောကျမြားက မေးမွနျးခဲ့သညျ။
“ခငျဗြားတို့သိပါတယျ …. ကြှနျတောျ သူ့ကို တကယ့ျကို အရိုးသားဆုံးဆကျဆံခဲ့ပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ပွောတာက အနာဂတျကို ဟောကိနျးထုတျရမှာနဲ့ တူနတေယျဗြ။ ရိုးရိုးလေးပွောရရငျ မတူညီတဲ့တခွားခေါငျးဆောငျတဈဦး ဆိုရငျလညျး ဘယျလာရုဈကနေ ယူကရိနျးနယျစပျတဈလြှောကျ တပျအငျအားတှေ ဆကျလကျတိုးမွှင့ျခထြားနေ တယျဆိုတဲ့အခကြျက သူ တဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေဲ့ အတိတျက သူ့ရဲ့အပွုအမူတှေ ရော၊ သူ့အဖှဲ့ထဲက လူတိုငျးပွောဆိုနကွေတာတှရေော၊ ဖွဈနိုငျတာတှအေားလုံးကိုရော ကွည့ျလိုကျမယျဆိုရငျ အားလုံးဟာ သူ့ဆုံးဖွတျခကြျကနေ လာတာပါပဲ။” ဟု ဘိုငျဒနျက ပွောသညျ။
ရုရှားတပျဖှဲ့ဝငျအငျအား ၁၀၀၀၀၀ ကြောျ ယူကရိနျးနယျစပျတဈလြှောကျ တပျဖွန့ျခထြားကွောငျးတှေ့ရပွီး ရုရှား အနဖွေင့ျ ယူကရိနျးကို အခြိနျမရှေးဝငျရောကျတိုကျခိုကျနိုငျကွောငျး အမရေိကနျအစိုးရက သတိပေးထားသညျ။
အမရေိကနျတပျဖှဲ့ဝငျအငျအား ၈၅၀၀ ကို အမွင့ျဆုံးတပျလှန့ျထားပွီး တဈရကျအကွာတှငျ အမရေိကနျအစိုးရ အနဖွေင့ျ ယူကရိနျးကိုထောကျပံ့ကူညီရနျ အမရေိကနျတပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ဥရောပဒသေတှငျ တပျဖွန့ျခထြားခွငျး အား အစီအစဉျမှဖယျထုတျထားခွငျးမရှိကွောငျး ပငျတဂှနျစဈဌာနခြုပျပွောခှင့ျရပုဂ်ဂိုလျ ဂြှနျကာဘီက ဇနျနဝါရီ လ ၂၅ ရကျနေ့က ပွောသညျ။
“ကြှနျတောျတို့အနနေဲ့ တခွားရှေးခယြျစရာအခှင့ျအလမျးတှကေိုလညျး ဖယျထုတျထားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျ တောျတို့ရဲ့အလုပျက သမ်မတကွီးကို၊ စဈဦးစီးခြုပျကွီးကို ရှေးခယြျစရာအခှင့ျအလမျးတှေ ထောကျပံ့ပေးဖို့ဖွဈပါ တယျ။ ကြှနျတောျတို့ ဒါတှကေို ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမှာပါ။ ဒါ့ကွောင့ျ လာမယ့ျရကျတှေ၊ သီတငျးပတျ တှအေတှငျးမှာ နောကျထပျတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို တပျလှန့ျထားဖို့အတှကျ ဆောငျရှကျသှားနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။” ဟု ဂြှနျကာဘီက ပွောသညျ။
« ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ Silent Strike ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆိုင်ပိတ်ခြင်း၊ သံပုံးတီးခြင်း၊ ကားဟွန်းတီးခြင်း၊ လက်ခုပ်တီးခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများတစ်ခုခုဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်သူများကို အရေးယူရန် တိုင်း အစိုးရ စီစဉ်နေ
ကျွန်းစုမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၏ နေအိမ် ချိပ်ပိတ်ခံရပြီးနောက် တစ်လအတွင်း လာရောက် တရားရင်ဆိုင်ရန် တရားရုံးက ဝရမ်းလာကပ် »